पत्थरी भएमा के खाने र के नखाने ? — Motivatenews.Com
पत्थरी भएमा के खाने र के नखाने ?
काठमाडाैं – पत्थरी अव्यवस्थित खानपान र जीवनशैलीको कारणले गर्दा लाग्ने रोग हो । पत्थरीबाट बच्नको लागी के खाने के नखाने भन्ने बारेमा जानकारी लिनुपर्दछ । पत्थरी बढ्दै गएमा औषधी वा शल्यक्रिया गर्नुको अन्य उपाय छैन् । पत्थरीबाट बच्नको लागी सदैव नियमित रुपमा समयमानै स्वस्थकर र व्यवस्थित खानपान गर्नुपर्दछ ।मिगौलामा उत्पन्न हुने विविध समस्यामध्ये पत्थरी पनि एक समस्या हो । यदि कसैलाई पत्थरी भएको छ भने यस्ता खानेकुरा खानुपर्दछ ।
यदि कसैलाई पत्थरी भएको छ भने पहिलेको तुलनामा बढीनै पानी पिउने गर्नुपर्दछ ।बढि पानी पिउँदा पिसाबको मात्रा बढेर मिगौंलामा भएको पत्थरीलाई बाहिर निकाल्न मद्दत गर्दछ ।
हरियो मकैलाई चिया बनाएर पिइएको खासै पाइएको छैन् । किनकि यसको फाइदाको बारेमा कमै मात्र मानिसलाई थाहा छ । हरियो मकैमा प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट्स, भिटामिन र मिनरल्स प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । मकैको चिया बनाएर सेवन गर्दा टाटे«ट्स नामको तत्व पाइने कारणले गर्दा यसले पत्थरी बन्ने प्रक्रियालाई रोकेर मिगौलाको इन्फेक्सन कम गर्दछ ।
जाडोमा धेरेले बदामको सेवन गर्ने गर्दछन् । बदामले न्यायो मात्र नभएर मिगौलाको पत्थरको पिडितलाई पनि फाइदा गर्दछ ।
बदाममा प्रशस्त भिटामिन र पोटासियमका पाइने कारणले पत्थरी बन्नको लागी रोक्दछ ।
पछिल्लो समयमा धेरैलाई गहतको झोल के हो भन्ने बारेमा जानकारी छैन् । यसलाई पत्थरीको एकदमै राम्रो औषधीको रुपमा लिइन्छ ।
यसको झोल खानाले पत्थरीलाई गलाउने काम गरी बाहिर निकाल्दछ ।
१. पालुंगोको साग, गोलभेडा सेवन नगर्ने । फलफुलमा अमला, कालो अगुर काक्रोबाट टाढै रहने । यस्तो फलफुलमा अक्जलेटको मात्रा बढि हुन्छ, जसको कारणले गर्दा पत्थर बन्ने सम्भावना अधिक हन्छ ।२. फूलगोभी , भन्टा, च्याउ, फर्सी लगायतका खानेकुरा पनि खानुपर्दन् यसमा युरिक एसिड बनाउने प्युरिन,न्युक्लयोटाइडको मात्रा प्रसस्त हुन्छ र किस्टल बनाई पत्थरीको समस्या उत्पन्न गराउँछ ।